San Zuren December 16, 2021 at 9:14 AM
Unknown January 22, 2022 at 6:22 AM
aung hla oo January 22, 2022 at 6:34 AM
ဧရာ၀တီသား January 22, 2022 at 11:40 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 9, 2022 at 4:50 AM
Noh Moh January 9, 2022 at 5:52 AM
သတိရှိပါ ဂရုစိုက်ပါနော် 💪
Unknown January 9, 2022 at 6:13 AM
ကယားပြည်နယ်မှပြည်သူများ ဘေးကင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ ကလစ်လဲလုပ် ။ နိုင်သလောက်လဲလှုနေပါတယ် ။ ဂရုစိုက်ကြပါလို့ပြောဖို့ အားနာမိတယ် ။
Chu Zim January 9, 2022 at 7:16 AM
aung hla oo January 22, 2022 at 6:44 AM
ဓာတ်ပုံတင်တာ ဘယ်လိုတင်လဲ ခင်ဗျ
Unknown February 26, 2022 at 7:00 AM
Triple K January 9, 2022 at 4:49 AM
Unknown January 9, 2022 at 9:05 AM
Unknown January 9, 2022 at 4:51 AM
Unknown January 23, 2022 at 5:30 AM
Daw Su Su Htway January 9, 2022 at 5:22 AM
Phyuthan January 9, 2022 at 5:31 AM
ISSHAN January 9, 2022 at 5:32 AM
Hla Hla Nue January 9, 2022 at 5:44 AM
Zin Mar Htwe January 9, 2022 at 6:11 AM
Unknown January 22, 2022 at 4:26 PM
Kyaw1972 January 9, 2022 at 6:17 AM
Nwe January 9, 2022 at 6:18 AM
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပထမဦးဆုံး ရှေ့ကနေ ဦးဆောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကလေး PDF ကိုလဲ ဂရုစိုက်ပေးကြပါဦးဗျာ 🙏🙏🙏
phyo January 9, 2022 at 6:24 AM
Nyein Chan January 9, 2022 at 6:25 AM
PaPaWaDe January 9, 2022 at 6:27 AM
Unknown February 26, 2022 at 11:18 PM
Moe Moe Lwin January 9, 2022 at 6:29 AM
Thz to Dr Pho!!
Kyi Kyi January 9, 2022 at 6:31 AM
Unknown January 9, 2022 at 6:33 AM
Fighting to all 💪💪💪
May Htoo Sein January 9, 2022 at 6:40 AM
Kyaw mae yaung January 9, 2022 at 6:41 AM
tin kolatt January 9, 2022 at 6:43 AM
Unknown January 9, 2022 at 6:44 AM
Unknown January 9, 2022 at 6:46 AM
ခုလဲ ၂၀၂၁ ကတချို့အကြောင်းအရာတွေတွေးမိတိုင်း လန့်နိုးနေတတ်ဆဲ..အိမ်မက်ကြီးသာဖြစ်ပါစေဆုတောင်းဆဲ..(ဒါတောင်ကိုယ်ဟာ စစ်ဘေးရှောင်နေရာမှာမဟုတ်သေးဘူး)ကယားတို့/ချင်းတို့/ စစ်ကိုင်းတို့အခြေအနေတွေကို (အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရမှာတောင် အားနာတယ်)
(ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ငါအရင်ထွက်သွားမယ်လို့ အမြဲတွေးခဲ့သူပါ....ခုကရင့်ကျက်လာတော့ပိုခံစားရတယ်)
Mai Kyi Nwe January 22, 2022 at 3:06 PM
Same feeling. 🥺
Beehive January 9, 2022 at 6:54 AM
fighting all clicker.
tharlay January 9, 2022 at 7:00 AM
ko Thet January 9, 2022 at 7:06 AM
minm99762@gmail.com January 9, 2022 at 7:06 AM
Unknown January 9, 2022 at 7:19 AM
အခုစာဖတ်ရလိုက်တဲ့အတွက်ပိုပြီး စိတ်ငြိမ်နိုင်ပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Unknown January 22, 2022 at 6:44 PM
Beehive January 9, 2022 at 7:24 AM
Thin Zar Aung January 22, 2022 at 3:32 PM
Thar Gyi January 9, 2022 at 7:44 AM
Unknown January 9, 2022 at 7:44 AM
World Wide January 9, 2022 at 7:48 AM
Hlwan Nway Oo January 9, 2022 at 8:00 AM
Unknown January 9, 2022 at 8:06 AM
Khant Min January 9, 2022 at 8:15 AM
foght for freedom
Wu Yi Fan January 9, 2022 at 8:19 AM
Su Khit January 9, 2022 at 8:29 AM
Unknown January 9, 2022 at 9:19 AM
Unknown January 9, 2022 at 9:47 AM
ArrD January 9, 2022 at 11:13 AM
Baganthu January 9, 2022 at 3:37 PM
Maythukhaing January 9, 2022 at 3:44 PM
Myo January 9, 2022 at 4:48 PM
Tin Win YTS January 9, 2022 at 5:25 PM
Dr Venom January 9, 2022 at 5:45 PM
BoTun January 9, 2022 at 5:55 PM
Zin Ko Lwin January 9, 2022 at 5:58 PM
May Shan January 9, 2022 at 6:01 PM
Unknown January 9, 2022 at 6:15 PM
လယ်တွင်းသားစောချစ်ရဲ့ မြန်မာစာကားပုံဝေါဟာရဇစ်မြစ်အကြောင်းလေးတွေ တင်ပေးပါ့လား။
Hla Hla Nue January 9, 2022 at 7:23 PM
Clicking with fighting💪💪💪
Unknown January 9, 2022 at 9:25 PM
Freya Phyo January 9, 2022 at 11:31 PM
Susana January 10, 2022 at 12:15 AM
Click for our Heroes 💪💪💪
Done done clickers
Unknown January 10, 2022 at 3:21 AM
Click မြဲ Click ဆဲ
Unknown January 10, 2022 at 3:56 AM
အမြဲတမ်းclickနေပါကြောင်း Fighting ❣️💪
ACpower January 10, 2022 at 6:22 AM
ACpower January 10, 2022 at 6:24 AM
Lan Bar January 13, 2022 at 12:41 PM
Zin Ko Lwin January 14, 2022 at 12:35 AM
Sammi January 15, 2022 at 1:37 AM
Ee January 16, 2022 at 6:24 AM
soelayaung January 22, 2022 at 5:23 AM
ကြိုးစားပြီး CLick နေပါတယ်
Unknown January 22, 2022 at 5:40 AM
အားရင် အးသလို click ပါတယ်
Thin Zar Aung January 22, 2022 at 5:41 AM
Unknown January 22, 2022 at 5:41 AM
PaPaWaDe January 22, 2022 at 5:45 AM
Htet Wai lwin January 22, 2022 at 5:58 AM
Unknown January 22, 2022 at 6:02 AM
TiCo January 22, 2022 at 6:09 AM
Unknown January 22, 2022 at 6:11 AM
Khant Min January 22, 2022 at 6:14 AM
Click တာတောင်လူ2သောင်းကျော်ပဲရှိတယ် ။ ကျွန်စိတ်တွေ
IO January 22, 2022 at 10:12 AM
It's hutrs but true.I dont like fking myanmar people that's why.
Unknown January 22, 2022 at 6:19 AM
Htet January 22, 2022 at 6:22 AM
ko Thet January 22, 2022 at 6:31 AM
Kyaw mae yaung January 22, 2022 at 6:31 AM
We Must Win✊❤
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 22, 2022 at 6:42 AM
Click သည်သာ အားထားရာ
Click သည်သာ လွတ်မြောက်ရာ
CLick သည်သာ ကြိုးစားအားထုတ်သင့်သည်အရာ
Unknown January 22, 2022 at 6:44 AM
Unknown January 22, 2022 at 6:46 AM
ကိုမောင် January 22, 2022 at 6:51 AM
December January 22, 2022 at 7:31 AM
ဟုတ်တယ် အဲ့နေ့ကိုအခုထိမမေ့ဘူး မနေ့ကလိုခံစားနေရတုံးပဲ တနေ့လုံးဘာမှမလုပ်နိုင် ထမင်းလဲစားလို့မရ မျက်ရည်တွေကကျနေတယ် နာကျည်းဒေါသမျက်ရည်တွေ လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ ယုတ်မာလိုက်တာ သူတို့အတွက်ပဲ စဉ်းစာကြတဲ့ လူ့ဘီလူးတွေ
Aung Myat January 22, 2022 at 7:07 AM
ဒီလို ​ဆောင်းပါး​လေး​တွေ များများတင်​ပေးပါဗျ။
We must win!! FIGHTING!!
Tin Win YTS January 22, 2022 at 7:24 AM
December January 22, 2022 at 7:26 AM
Demo January 22, 2022 at 7:35 AM
Unknown January 22, 2022 at 7:54 AM
Unknown January 22, 2022 at 8:05 AM
MayPhoolZaw January 22, 2022 at 8:06 AM
Unknown January 22, 2022 at 8:14 AM
လူတစ္ေယာက္ကို အထင္ေသးတာဟာ အျမင္ေသးသိမ္ရာ ‌ေရာက္ပါတယ္။
လူတစ္ဉီးတိုင္းတစ္‌ေယာက္တိုင္းမွာ အရည္ခ်င္းဆိုတာ ကိုယ္စီရိွၾကပါတယ္ေနာ္။
PYAE PYAE PHYO January 22, 2022 at 8:19 AM
Hlaing Myat Aung January 22, 2022 at 8:20 AM
မင်းတို့က ခြင်းကြားလွယ်တဲ့ ရွာလည်ခွေး
ငါတို့က အပြင်းစားတွယ်မယ့် ကာကွယ်ရေး....✊
အဆုံးထိ ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ဖေးမကူညီ လက်တွေတွဲပြီး အရောက်သွားကြမယ်.....
ဝင်းသန်း January 22, 2022 at 8:49 AM
Good January 22, 2022 at 8:53 AM
ArrD January 22, 2022 at 9:02 AM
ကိုမောင် January 22, 2022 at 9:09 AM
Saw San Myint January 22, 2022 at 9:17 AM
မေအလိုး မင္းေအာင္လႈိင္ နဲ့ မေအလိုး အေပါင္းပါ လူ႔တိရစၧာန္ တစ္ စု ကို လူ သားစစ္ စစ္ ျပန္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ဖို႔က ဘဝသစ္ကိုေျပာင္းေပးဖို႔ကလြဲ တစ္ျခား နီးလမ္းမရွိေတာ့ပါ
Good January 22, 2022 at 10:19 AM
Good January 22, 2022 at 10:20 AM
Unknown January 22, 2022 at 3:39 PM
ခလေးရဲ့အဖေ January 22, 2022 at 3:47 PM
clicker အသစ်တယောက်ပါ ခင်ဗျ
M.U skyred January 22, 2022 at 3:56 PM
Lwin Lwin January 22, 2022 at 4:17 PM
Zin January 22, 2022 at 4:21 PM
Phoe Lamin January 22, 2022 at 6:25 PM
Unknown January 22, 2022 at 7:05 PM
Click မှာကြောက်လို့ data ဈေးတတ်လေ ပို click လေပဲ
W.Y January 22, 2022 at 8:28 PM
Zin January 22, 2022 at 8:45 PM
ဇေယျ January 22, 2022 at 10:00 PM
စင်စစ် လူကို အကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုး
လူသည် မိမိကိုယ် မိမိသာလျှင် ပဓာနအားဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းသူဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်
မိမိပြုသော စေတနာအမှုကံက မိမိကို
သို့ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဒဿနအလိုအရ လူသည် မိမိ၏ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝီရိယတို့ကိုသာ အားကိုးပြု၍ မိမိဘဝကို ကောင်းအောင် ဖန်တီးနိုင်သူ ဖြစ်လေသည်။
Thura Thein January 22, 2022 at 11:44 PM
take care your health every clicker
Lwin Lwin January 23, 2022 at 1:04 AM
Hla Hla Nue January 23, 2022 at 1:50 AM
FridayPaingSoe January 23, 2022 at 10:55 AM
ဝမ်ရိပေါ်မိန်းမ���� January 24, 2022 at 10:25 PM
Unknown January 25, 2022 at 7:31 AM
aungthurahtun January 26, 2022 at 4:02 AM
Blank Verse February 25, 2022 at 8:15 PM
Nyein Chan Aung February 25, 2022 at 8:29 PM
Thein Soe February 25, 2022 at 8:56 PM
Thikehtun February 25, 2022 at 10:18 PM
နေ့ ေောချိန်ရရင။ ရသလို ကြိုးစား ကလစ်ပါတယ်
Unknown February 25, 2022 at 10:40 PM
Unknown February 25, 2022 at 10:49 PM
Done thank sayar
Yoke Kyoe February 25, 2022 at 10:50 PM
Phyu February 25, 2022 at 11:41 PM
ခုခဖိန်မှာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာ ကလစ်တာပဲရှိနေလို့ စိတ်မကောင်းဘူး။
Saw War Say February 25, 2022 at 11:48 PM
Unknown February 26, 2022 at 12:01 AM
အကုန်တီးမယ် February 26, 2022 at 12:07 AM
dawsawhla February 26, 2022 at 1:18 AM
Unknown February 26, 2022 at 1:25 AM
ကိုမောင် February 26, 2022 at 1:27 AM
Shwe Nyaung February 26, 2022 at 1:32 AM
နိူင်ရာတစ်ဒေါင့်တစ်နေရာကပါဝင်ပြီးClick နေပါတယ်...point 50 မှ 150 ကြားလေးပေါ့..data နဲ့မို့အများကြီး ..မ clickနိူင်ဘူး....
Unknown February 26, 2022 at 2:00 AM
Unknown February 26, 2022 at 1:57 AM
Eithu February 26, 2022 at 2:24 AM
ရတဲ့အချိန်ရသလို click နေမယ်
Unknown February 26, 2022 at 3:04 AM
နောက်ဆုံးlink လေး နှိပ်ပေးငြပါ
ဂျူနီယာ မင်းမင်း February 26, 2022 at 5:25 AM
ကျန်းမာရေး မိသားစု အားလုံးကို လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ 🙏🙏🙏
Yamin February 26, 2022 at 4:03 AM
Saw War Say February 26, 2022 at 4:39 AM
ဂျူနီယာ မင်းမင်း February 26, 2022 at 5:18 AM
ဂျူနီယာ မင်းမင်း February 26, 2022 at 5:29 AM
တော်လှန်ရေး အတွက် ပေးဆပ်နေတဲ့ ညီကို မောင်နှမ အားလုံးကိုလဲ ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်🙏🙏🙏
Unknown February 26, 2022 at 5:45 AM
Love u all clicker😍😍
Saw Tha Pwee February 26, 2022 at 5:52 AM
Aepu February 26, 2022 at 6:48 AM
နွေဦးလူငယ် February 26, 2022 at 10:32 AM
Min Thein Oo February 26, 2022 at 10:58 AM
ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ 💪😊
အောင်ပွဲခံဖို့ Click ကြစို့
YNT February 26, 2022 at 8:20 PM
PDF တွေကို ဝိုင်းချစ်ကြရအောင်
Clicker lay February 28, 2022 at 7:59 AM